Shiinaha Anchoring Clamps Aluminium Daawaha ADSS / Round Cable PA Soo-saarista iyo Warshad | JOOJI
Isku-xidhka Clamps Aluminium Daawaha ADSS / Round Cable PA
Sharaxaadda xirmooyinka xirmooyinka Xargaha xargaha ee xarigga adeegga ab cable. Xiritaanka ADSS xirmooyinka waxaa loogu talagalay in lagu xiro adeegga dahaaran ...
Sharaxaadda xirmooyinka xirmooyinka
Xirmooyinka isku xiraya khadka adeegga ee xarigga ab. ADSS xirmooyinka isku xirnaanta waxaa loogu talagalay inay ku xirmaan khadadka adeegga dahaaran oo leh 2 ama 4 koronto-qabteyaal ulaha ama derbiga. ADSS qabashada dhamaadka dhimashadu waxay ka kooban tahay jir, xajmiyo iyo damiin la saari karo oo la hagaajin karo ama suuf. Mid ka mid ah xargaha xargaha ee la isku hagaajin karo ayaa ah nashqad lagu taageerayo farriinta dhexdhexaadka ah, jeexjeexa ayaa is-hagaajin kara Fiilooyinka Pilot ama kirishboonka nalalka wadada ayaa lagu hogaaminayaa haynta. Furitaanka iskiis waxaa ka muuqda aaladaha isugeynta ee guga si si fudud loogu geliyo qaboojiyaha haysa. Heerka: NFC 33-042.
Waxyaabaha ADSS isku haysa isku haysa
ADSS-da isku xirta jirka, qeybta ugu weyn ee farsamada waxaa lagu soo saaray shey culus oo cimilada ka hortagaya. Xudunta, oo laga sameeyay maaddada synthetic ayaa keenta cadaadis farsamo oo lagama maarmaan u ah sii haysashada xarigga jirka ee haysa. .Waxaa lagu xirayaa fiilooyin isku-dhafan iyo kuwa isku-xidhka ah.
Feature of haro barroosinka hagaajin
Wixii ku habboon rakibidda ADSS clamps dhamaadka, tallaabooyinka soo socda ayaa lagula talinayaa:
Moodooyinka PA-100S * PA-120S * PA-140S * PA-160S * PA-180S * PA-200S *
Cabirka mitirka (mm) 7 ~ 10 10 ~ 12 11 ~ 15 14 ~ 16 15 ~ 18 18 ~ 20
(*) Ku dar L (mm) moodooyinka Fiilooyinka-8 faseexadeysan, AAAC ama muraayadda birta ee Fibreerka la xoojiyay; Wareega ADSSXoog siligga sida ku xusan fiilada